Kheyre: Ma jiro Askari aan mishaar la siin – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
STN News March 19, 2019 Leave a comment
Ra’iisal wasaraha xukuumadda Soomaaliya oo xalay khudbad ka jeedinayay kulan looga hadlayay dardargalinta is dhaxgalka bulshada iyo laamaha Amniga ayaa soo hadal qaaday cabashada maalmihii ugu danbeeyay ay jeedinayaan qaar ka mid ah ciidamada dowladda.
Ra’iisal wasaaraha ayaa wax ba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in ay jiraan ciidamo aan mishaar qaaday ku dhawaad Afar bilood, isaga oo sheegay in askari walba oo ka tirsan ciidamada misharkiisa si joogta ah u helo.
Laakiin waxaa uu soo hadal qaaday in jiraan ciidamo wali aan diiwaangashneyn, kuwaa oo hadda la rabo in tirakoob lagu sameeyay kaddibna la diiwaangaliyo.
‘’Ma jiro askari ka tirsan ciidamada dowladda oo diiwaan-gashay oo aan mishaarkiisa la siin, inta ay ka maqan tahayna waa inta aan la diiwaangalin, fadlan geeya goobaha loogu tala-galay, ku diiwaangaliya ku koontaroola, xuquuqdoodana aniga iga soo doona’’ ayuu yiri ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in lacagta mishaarka ah ee loogu talagalay ciidamada loo baahan yahay Askari walba in ay si toos ah u soo gaarto oo aan gacan kale loo marsiin, isaga oo sheegay in saraakiisha ciidamada lagula xaasbtami doono arintaan iyada ah.
‘’Waxaan rabnaa in lacagta loo qoodeeyay wiilashaa ciidamda ah in ay si toos ah u gaarto oo aan dhaxda laga bixin, kuwa gaaradaha waaweyn heysta waxaa laga rabaa in ay shaqadooda ahaato in shilinkii lagu aaminay dadkii loogu talagalay la gaarsiiyo’’ ayuu yiri ra’iisal wasaare Kheyre.
Dhawaan ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa isaga soo baxay fariisimo ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha hoose iyaga oo ka cabanaya mishaar la’aan, waxaana deegaannadii ay ciidamada ka baxeen la wareegay xoogagga Al-shabaab.
← Barasaabka Turkana oo sheegay in la buunbuuniyay baahida ismaamulkaasi ka jirta
Madaxweynaha Soomaaliya Oo Maanta Furaya Kal-Fadhiga 5aad Ee Aqalka Sare →